२ नं. प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलले कसरी गर्दै छन् तयारी ? – Etajakhabar
२ नं. प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलले कसरी गर्दै छन् तयारी ?
उम्मेदवार चयनमा कांग्रेसको ढिलाइ –
साउनभित्रै उम्मेदवार चयन गरेर निर्वाचनमा होमिने दाबी गरे पनि कांग्रेसले प्रदेश नम्बर २ मा अझै उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बेहोरेको हारबारे समीक्षा गर्दै कांग्रेसले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि साउनभित्रै उम्मेदवार टुंग्याउने बताउँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचदिने भारत भ्रमणमा रहेका वेला दोस्रो तहका नेताहरू दिनहुँ उम्मेदवारको टुंगो लगाउन बसे पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । सभापति भारतबाट फर्किएपछि मात्रै कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाउने संकेत दिएको छ ।
‘साउनभित्रै उम्मेदवार चयन गरी २ असोजका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउने तयारीमा थियौँ,’ नेता रमेश रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बाढी र डुबानका कारण केही ढिलाइ भएको छ । तर, अब ११–१२ भदौसम्म उम्मेदवारी टुंग्याइसक्छौँ ।’
तर, कांग्रेसले परिपत्र गरेअनुसार जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिससमेत आउन सकेको छैन । आएका सिफारिस पनि विवादित बनेपछि समस्या भएको छ । क्षेत्रीय सभापतिको सिफारिसमा जिल्ला हुँदै आउनुपर्ने सूची कहीँ क्षेत्र र कहीँ जिल्लाबाट आएका छन् । क्षेत्र र जिल्लाको सूची नै फरक आएपछि महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहितका पूर्वपदाधिकारी, प्रदेश नम्बर २ का केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापतिसहितका नेताको भेला दिनहुँजस्तो बसे पनि उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन ।
मुख्यगरी नगरपालिकामा उम्मेदवार चयन गर्न कांग्रेसलाई गाह्रो परेको छ । कतिपय क्षेत्रबाट आएका सिफारिसमा जिल्लामा रहेका नगरपालिकाबाट मेयरमा एकभन्दा बढीको नाम आएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघिदेखि नै केही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी चयनको प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रमा आउँने क्रम सुरु भएको थियो । तर, निर्वाचन सरेपछि यो क्रम रोकिएको थियो ।
नगरमै समस्या वीरगन्ज महानगरमा कांग्रेसले अजय द्विवेदीलार्ई मेयरमा उठाउने सम्भावना बढी छ । तर, टुंगो लागिसकेको छैन । धनुषाको जनकपुर, सप्तरीको राजविराज, बाराका दुई उपमहागरपालिकासहितका नगरपालिकामा आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेदवार टुंग्याउन सकस परेको छ ।
तालमेल माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसले आफ्नो पकड कम भएका पूर्व–पश्चिम राजमार्गआसपासका २० वटा तहमा तालमेल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘खासगरी हामी कमजोर रहेको ठाउँमा तालमेल गर्ने पक्षमा छौँ,’ रिजालले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारी माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्नुपर्छ भन्नेमा छ ।’ पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएपछि तालमेल गर्दा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले यसपटक उम्मेदवारी चयनअघि नै तालमेल गर्ने नीति लिएको छ । २१ भदौमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने समय तोकिएको छ ।
एमालेले टुंग्यायो दुईतिहाइ तहमा उम्मेदवार
एमालेले प्रदेश नं. २ का दुईतिहाइ स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य शत्रुधन महतोका अनुसार २ असोजमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि धनुषाबाहेक सात जिल्लामा पार्टीले उम्मेदवार टुंग्याएको छ । स्थायी समितिको निर्देशनअनुसार बाँकी उम्मेदवार १२ गतेभित्र प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकबाट टुंगो लगाइने महतोले बताए । ‘अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ, बाँकी उम्मेदवार पनि निर्देशनअनुसार १२ गतेभित्र टुंग्याइसक्छौँ,’ उनले भने ।
एमालेले सिरहाको लहान नगरपालिकासहित १७ वटै तहमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । सप्तरीका १७ वटा तहमा पनि उम्मेदवार छनोट भइसकेका छन् । महोत्तरीका १६ तहमध्ये ८, सर्लाहीका १८ मध्ये ९, रौतहटका १५ मध्ये १४, पर्साका १६ मध्ये १३, बाराका १५ मध्ये ७ तहमा उम्मेदवार छनोट भइसकेको नेता महतोले बताए । वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेले बसरुद्दिन अन्सारीलाई मेयरका रूपमा अघि सारेको छ । तर, बाराको कलैया र जितपुर उपमहानगरपालिकामा भने एमालेले अझै मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छैन । धनुषाका १८ वटै तहमा एमालेले उम्मेदवार टुंगो लगाएको छैन ।
एमाले रणनीति सत्तापक्षलाई संशोधनविरोधीका रूपमा प्रचार गर्ने एमालेले प्रदेश नंं. २ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सत्तापक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको हठका कारण संविधान संशोधन विधेयक असफल भएको प्रचार गर्ने भएको छ । सत्तापक्षले नियोजित रूपमा विधेयकलाई असफल बनाएर एमालेलाई संशोधनविरोधीका देखाउने ‘चुनावी दाउपेच’ गरेको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । ‘हामीले त पहिलेदेखि नै अहिले संविधान कार्यान्वयन गरौँ, निर्वाचनपछि आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरौँ भन्दै आएका हौँ । यसमा जनता प्रस्ट छन्,’ महतोले भने, ‘तर, सरकार दुईतिहाइबाट संशोधन होस् भन्नेमा इमानदार नदेखिँदा विधेयक फेल भयो । हामी यही कुरा अब जनतालाई प्रस्ट पार्नेछौँ ।’
तालमेलका लागि कांग्रेसबाहेकसँग खुला एमालेले निर्वाचनमा कांग्रेसबाहेकका दलसँग तालमेलका लागि खुला रहने रणनीति अख्तियार गरेको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस भएका कारण बाँकी दलसँग तालमेलका लागि खुला रहने नीति अख्तियार गरिएको महतोले बताए । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा राजपालगायत मधेसकेन्द्रित दलसँग तालमेलका लागि वार्ता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ ।
पहिलो दल बन्ने लक्ष्य प्रदेश नं. २ का १ सय ३६ तहमध्ये कम्तीमा ६५ देखि ७० स्थानमा प्रमुख जित्ने एमालेको लक्ष्य छ । प्रदेश नम्बर २ का संयोजक सत्यनारायण मण्डलले मधेसको विकासमा खेलेको भूमिकाका कारण पहिलो बन्ने दाबी गरे । अर्का नेता महतोले ०५४ को स्थानीय तहमा सिरहाबाहेक सबै जिल्लामा पहिलो दल बनेर जिविस सभापति बनाएको र दोस्रो संविधानसभामा पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा मत प्राप्त गरेकाले यसपटक पार्टी पहिलो बन्ने दाबी गरे ।
माओवादीले अर्को हप्तासम्म उम्मेदवार टुंग्याउने
१३ भदौमा बाँकीको टुंगो माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहका उम्मेदवार अर्को हप्तासम्म टुंग्याउने भएको छ । उम्मेदवार चयन गरेर मैदानमा होमिने माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर २ का इन्चार्ज मात्रिका यादवले बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३६ तहमध्ये करिब ६० प्रतिशत उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ,’ यादवले भने, ‘अब ४० प्रतिशत उम्मेदवारको टुंगो लगाउन बाँकी छ, अर्को हप्ताभित्र सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्छौँ ।’
१३ भदौमा बाँकीको टुंगो १३ भदौमा जनकपुरमा बस्ने बैठकले बाँकी उम्मेदवारको टुंगो लागाउने यादवले बताए । जनकपुरमा बस्ने बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित प्रदेश नम्बर २ का हेडक्वार्टर सदस्यलाई बोलाइएको छ । सोही बैठकले बाँकी उम्मेदवारको टुंगो लगाउने यादवले बताए । ‘पहिला सहमति हुन नसकेका तहमा सीधै माथिबाट उम्मेदवार घोषणा गरिन्थ्यो,’ यादवले भने, ‘तर, अहिले जनमत बुझेर मात्र उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यास थालेका छौँ ।’
तालमेल पर्खाइमा तालमेलका कारण पनि उम्मेदवार घोषणामा ढिलाइ भएको प्रदेश नम्बर २ का संयोजक विश्वनाथ साहले बताए । ‘आफूले जित्न सक्ने तहमा एक्लै भिड्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी कमजोर भएको तहमा तालमेल गर्ने योजनामा छौँ ।’ माओवादीले कांग्रेससहित मधेसकेन्द्रित दलसँग तालमेल गर्ने योजना बनाएको छ । कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँग छलफल गरेर छिटै टुंगोमा पुग्ने साहले बताए ।
मधेसमा पहिलो हुने दाबी माओवादीले मधेसमा पहिलो दल बन्ने दाबी गरेको छ । ‘सकभर पहिलो शक्ति बन्नेछौँ, त्यस्तो हुन नसके दोस्रो शक्तिचाहिँ पक्कै हुन्छौँ,’ यादवले भने । सरकारमा हुँदा मधेस–पहाड जोड्ने काम गरेकाले मधेसी जनताले माओवादीलाई जिताउने यादवले दाबी गरे । तर, पहिलो वा दोस्रो हुन माओवादी केन्द्रले धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यादवलगायत पार्टी प्रवेश गर्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । यादवलाई १४ भदौमा सर्लाहीबाट प्रवेश गराउने उनले बताए ।
राजपाले १३ भदौसम्म उम्मेदवार छान्ने
राजपाको केन्द्रीय नीति एक्लै निर्वाचन लड्ने भन्ने छ । तर, स्थानीय पार्टीको अनुकूलताका आधारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग तालमेल गर्न सक्नेछ । सुरुमा फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसँग तालमेल नगर्ने बताएको राजपाले स्थानीय नेताहरूको ब्रिफिङपछि उनीहरूसँग पनि तालमेल गर्ने रणनीति बनाएको हो । सप्तरीमा यी दुई पार्टीसँग तालमेल गर्नेबारे राजपाका स्थानीय नेताहरूबीच छलफल पनि सुरु भइसकेको छ ।
राजपा जिल्लाबाट उम्मेदवारहरूको नाम तय गर्ने तयारीमा छ । जिल्लामा नाम टुंगो नलागेको अवस्थामा केन्द्रबाट टुंगो लगाइनेछ । ९ देखि १३ भदौसम्म उम्मेदवारको नाम तय गर्ने काम जिल्ला पार्टीले गर्नेछ । जिल्ला पार्टीले टुंगो लगाउन नसकेका तहका उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम मात्रै पार्टीको केन्द्रीय तहमा आउनेछ ।
राप्रपाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सबै तहमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । आगामी हप्ता उम्मेदवारी चयन गरिसक्ने सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । राप्रपाले उम्मेदवार चयनका लागि जिल्ला कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तालमेलको विषयमा विभिन्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको राप्रपाले जनाएको छ । तर, निर्णय भने भइनसकेको श्रेष्ठले बताए । पार्टीका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन हुने क्षेत्रको भ्रमणमा आगामी हप्ता जानेसमेत उनले बताए ।
लोकतान्त्रिक फोरम लोकतान्त्रिक फोरमले पनि सबै तहमा उम्मेदवार उठाउने भएको छ । सकभर तालमेल नगरी निर्वाचनमा जाने उसको तयारी छ । १५ भदौसम्म उम्मेदवार चयन गरिसक्ने लोकतान्त्रिक फोरमले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
फोरम उम्मेदवार टुंगो लाग्दै संघीय समाजवादी फोरमले अधिकांश उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार केही स्थानमा उम्मेदवारको नाम टुंगो लाग्न बाँकी भएकाले नाम सार्वजनिक नभएको हो । संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका दलहरूसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने योजना फोरमको छ । ‘प्रदेश नम्बर २ मा फोरम पहिलो शक्ति हो, तालमेल पनि त्यसैअनुसार हुन्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिक राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले तेस्रो चरणको निर्वाचनबारे छलफल गर्न शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । प्रचार समिति संयोजक सुनील थापाले भने, ‘निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छौँ । बैठकले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०९, २०७४ समय: ८:०३:१४